P10 Outdoor Perimeter no nitarika fisehoana China Manufacturer
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Ny efijery fampirimana ivelany an'ny Outner Led Ledner,Ny efijery fampisehoana efitrano ivelany,Fampisehoana fisehoana ivelany ho an'ny Football
Home > Products > Fampisehoana LED Perimeter > P10 Outdoor Perimeter no nitarika fisehoana
Ny efijery fampisehoana efitrano ivelany nampiasaina eo amin'ny sehatry ny baolina kitra, kianja filalaovana basikety ary toerana fanaovana fanatanjahantena hafa. Izy io no fitambatra tonga lafatra amin'ny maoderina fanatanjahantena sy raharaham-barotra lalao mahafinaritra sy ny lalao tsingerin'ny fampahalalana momba ny dokambarotra. Ny efijery ivelany an-tsokosoko ivelany ivelany , dia manankarena amin'ny fanandramana miady, tranga mahomby, kianja manerantany amin'ny fifaninanana eran-tany tsy mampitaha ny kalitao mihetsika, fampisehoana loko tena tsara, hetsika mivantana amin'ny haino aman-jery, ho an'ny mpanohana sy kianja stadium an-tsokosoko hampiroborobo ny sarin'ny marika. Raha manao dokam-barotra ny hafatra dia ny fahafaham-po indrindra dia mahatanteraka ny fampirisihana ny mpihaino rehetra ary tonga lafatra. Fa maninona no anton'ny fisehoan- kevitry ny efijery Led perimeter dia nalaza be tamin'ny kianja natrehina.
Priva PH10 Screenshot fampirantiana ivelany ivelany ho an'ny Football dia manaiky ireo diode efa mandroso sy ny fananganana PCB koa teknolojia famokarana haingam-pandeha izay mahatonga ny tontolon'ny fampirantiana fitarihana ambany fanjifana herinaratra, sary mazava kokoa ary mazava, tsy misy jiro sy jiro tsy mazava. Fampisehoana tampoka feno loko LED ivelany dia namboarina sy novokarina tamina endrika tsy voaroy sy vovoka ary afaka miasa tsara amin'ny orana sy ny tara-masoandro. Afaka tafangona sy esorina mora foana, izy io dia vokatra mety ho an'ny dokambarotra isan-karazany.
Anaran'ny jiro LED: Efijery fampisehoana P10 Led Outdoor Stadium
Haben'ny kabinetra: 1280mm (w) X 800mm (h) - namboarina ny haben'ny kabinetra
Ny efijery fampirimana ivelany an'ny Outner Led Ledner
Ny efijery fampisehoana efitrano ivelany
Fampisehoana fisehoana ivelany ho an'ny Football
Ny efijery ambaratonga avo an'ny famaritana anatiny
Fitaovana fampirantiana ivelany ivelan'ny trano ivelany
Ny efijery fanamainty vita amin'ny LED
Ny efijery fampisehoana efijery anatiny